BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU | robemedia
Home AfaanOromo BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU
Kanaa olitti wanneen mootummaan Wayyaanee bara dabre kana keessa uummataa fi saba keenya irratti adeemise, guutuus tahuu baatu hamma tokko mildhannee jirrra. Mee ammammoo Oromoon dhumaatii fi dukkana kana keessa dabree, wanneen tokko tokko kan inni bu’eeffate haa ilaallu. Uummanni Oromoo dhumaatii fi dhiiga ofiitiin ofii isaa fi Oromiyaa isaa biyya-lafaa guutuu irratti beeksifatee argama. Hardha Oromiyaan teenya akka biyyoota sonaan beekamoo: akka Indiyaa fi Meekiskoo, akka Aljeeriyaa fi Jarmanii faa ramaanii (kaartaa) addunyaa irratti galmeeffamuun iftee muldhatti. Keessumaa erga leencichi Oromoo Fayyisaa Leellisaa, Olompiyaa Riiyoo irraatti raajii Oromoof baasee, Oromoo fi Oromiyaan qalbii fi sammuu uummatoota addunyaa kitila hedduun lakkaawamanii keessatti galmeeffamanii jiru. Guyyaa tokkicha keessatti namoonni biliyoona lamaa ol (miliyoona kuma-lamaa ol) gocha Fayyisaa Leellisaa irraa kan ka’een, waayee Oromoo fi Oromiyaa qalbeeffatani. Ammaan tana gaazexoota, tiibiiwwanii fi raadiyoolee addunyaa irratti daran beekamantu waayee saba keenyaa dabrsaa jira. Eekaa, waaqaa gaditti lafaa olitti hamma bilisummaa fiwalabummaa keenya gonfannutti duubatti deebiyuun gonkummaa hin jiru!
Maarree, erga karaa qabsoo keenyaa irraa duubatti deebiyuun hin jirree, tokkummaa fi dhaabbii keenya, kayyoo fi tooftaa keenya, jaarmaa fi dureewwan keenya, hidhannoo fi sabbata keenya akkaan jabeeffachuu qabna! “Qabnaan” kun dirqama dhalootaa fi dirqama seenaa-ti. Furguggee dirqama kanaa jalaa eessattuu gajjedhanii miliquun hin dandayamu. Dhumaatii uummata Oromoo isa gaafa Irreechaa-tii asii jiraa Oromoo dhiisitii, du’aan Oromooyyuu tokkoomee, tokkummaan tarkaanfachuu qaba! Ammaan booda walqocoluu fi walxiqqeessuun “riphxee-loltuuwwan” feesbuuk keessatti adeemaa jiru kun dhaabachuu qaba! Hardhaan booda: arrabnii fi qalamni keenya, shimallii fi eeboon keenya wal irrattii mitii, diina Oromoo fiOromiyaa irratti xiyyeeffamuu qaba! Dhiiga ijoollee Oromoo akkasitti dhangalye santuu, lafee haayyolee Oromoo akkasitti caccabsame santu akka waltaanee, tookkummaan harqoota gabrummaa Habashaa ofirraa darbannu nu dirqisiisa. Eekaa, akkuma jagnichi keenya Jaarraa Abbaa Gadaa jedhe san: “bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa akka du’aatii, waan ooluu miti!”
Previous articleA PROPOSAL ON THE CONSOLIDATION OF OROMO SUPPORT
Next articleGaafii Ummataawaliin Dhahanii Bira Darbuuf Yaaluun Essanuu Nama Hin Gahu!
This Month: 47567